Guinea Bissau: Buhari enyela mba a $500,000 maka ntuliaka ha - BBC News Ìgbò
Guinea Bissau: Buhari enyela mba a $500,000 maka ntuliaka ha
26 Eprel 2019
Buhari enyela mba Guinea Bissau $500,000 maka ntuliaka ha
Onyeisiala Naijiria bụ Muhammadu Buhari enyela mba Guinea Bissau puku nari ise dọla na akọrọngwa ndị ọzọ iji kwado ntuliaka ha.
Akọrọngwa ndị ahụ gụnyere ngwongworo abụọ, ụgbọala Hilux ise, ọgbatumtum iri, bụ iji kwado ntuliaka maka ọkwa ndị omeiwu nke mba ahụ.
N'ozi ọnụ na-ekwuru Buhari bụ Garba Shehu wepụtara, enyemaka ahụ bụ n'ọsịsa nye mbeku nke gọọmenti mba Guinea Bissau bekuru ya.
President Buhari had in response to an urgent request for assistance by the Government of Guinea Bissau graciously approved support to the country's election process including three hundred and fifty (350) units of electoral kits,...
— Garba Shehu (@GarShehu) 26 Epreel 2019
Mba Guinea Bissau bụ mba dị n'ọdịda-anyanwụ Afrika nke ndị Pọtụgizi chịrị tupu ha nwe nnwereonwe n'afọ 1973.
Dịka CIA World Factbook siri depụta ya na webụsait ha, Guinea Bissau nwere okpukperechi dị icheiche gụnyere ndị ụka Alakụba( pasentị 45) ndị ụka Kraisti (pasentị 22) Christians, na ndị ụka ọdịnala dị (pasent 414.9)
Ụgwọ opekatampe abụghị naanị maka ndị ọrụ gọọmentị
Onyeisi otu jikọtara ndị ọrụ bụ Ayuba Waba kwuru na onye ọbụla nwere ndị ọrụ karịrị iri abụọ na ise ga-eso ndị gọọmentị na-akwụ ụgwọ a.
Waba kwuru nke a na mkparịtaụka ya na ndị ụlọ ntaakụkọ Channel TV nwere taa.
Ọ gara n'ihu kwuo na ọ bụghị naanị ndị na-arụrụ goomentị ọrụ ka a na-akwụ ụgwọ opekatampe puku naịra iri atọ.
Onyeisi ndị oyi ndụ egwu wakporo mba Sri Lanka n'ụbọchị Easter so nwụọ n'ime mwakpọ ahụ ha mere.
Nwa amadị a akpọrọ Zahran Hashim nwụrụ n'ụlọ ndịna Shangri-La bụ nke so n'ebe ha wakporo.
Nna onye ọgba bọọlụ bụ Emiliano Sala, nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu e soro nwa ya nwụọ dịka ọnwa atọ gachara.
Heracio Sala gbara afọ iri ise na asatọ nwụrụ n'ụbọchị Fraịde abalị iri abụọ na isii nke ọnwa Eprelụ 2019 n'ihi obi nkolopu.
Media captionIhe omimi dị n’emume Ikeji Arọndizuọgụ
A machiela ngagharị na Kajuru
Image copyright Facebook/El-rufai
Gọọmenti Kaduna steeti amachiela ngagharị n'okpuru ọchịchị Kajuru dị na steeti ahụ ka e gbuchara mmadụ atọ ma mụnye otu obodo ọkụ.
Kajuru nọ n'ọgbaghara na nso nso dịka akụkọ gbu,gbuo gbuo si ebe ahụ apụta.
Mana o bidoro na-ede jiji kemgbe Tọzde ka a hụchara ozu otu nwa Awụsa n'ime olulu.
Iji bọrọ ọnwụ nwanwoke ahụ, ụmụ ndị Awụsa gara wakpo ụmụaka ndị Adara abụọ ka ha na-alọta ahịa tie ha, e bugara otu n'ụlọgwụ , ọ nwụọ n'ụtụtụ taa bụ Fraide.
Nke a kpalitere egwu nke na ndị ọrụ nchekwa nwujuru ebe niile na mpaghara ahụ.
Nwaanyị onyeocha na-egwu wayo
Nkenke aha onyonyo Anna Sorokin
Otu ụlọikpe dị na mba Amerịka amaala otu nwaayị onye ocha ikpe ohi maka ji aghụghọ anapụta ndị mmadụ ego were ebi ndụ alabanko.
Ihe mere Kenya ji kpụpụ ụmụafọ Naịjirịa ise ụlọikpe
Anna Sorokin, onye na-agwa ndị mmadụ na ya bụ nwa ọgaranya na-ekpori ndụ n'ụlọoriri na nkwarị kacha oke ọnụ ahịa ma na- agba ụgbọelu ndị enyị ya, ndị ụlọakụ na ụlọọrụ ndị kwenyere na ụgha ya kwụrụ ụgwọ ya.
Ụnụ ghọtahiere ihe kwuru -Ngige
Mịnịsta na-ahụ maka ọrụ bụ Chris Ngige agọọla ụkwụ n'aka ya na ihe a sị na ya kwuru maka ndị dọkịta abụghị etu ya siri kwuo ya.
Ụnụ ghọtahiere ihe m kwuru – Ngige
O kwuru ka ihe ya kwuru bụ na ndị dọkịta anaghị enwe ohere ọzụzụ na Naijiria nke mere ha ji aga alabekee maka ịgụwanye akwụkwọ iji bụrụ ọkaibe n'ọrụ ha nke bụ ihe ọma nyere Naijiria dịka ha na-ezilata ego na ihe ha mụtara n'ala bekee.Gọọmenti etiti etinyele ego na nchekwa agbata ya mba ndị ọzọ.
A mapụtala N52bn maka nchekwa
Nkenke aha onyonyo Yemi Osinbanjo, Osote onyeisiala na-anọchite onyeisiala Muhammadu dịka ọ gara njem alabekee
Gọọmenti etiti ebinyela aka n'akwụkwọ ijeri dola iri ise na abụọ bụ ego a mapụtara maka iji teknụzụ echekwa agbata Naijiria na mba ndị ọzọ. Ọ bụ Osote onyeisiala bụ Yemi Osinbajo bu onye mere nke a na nzuko ya na ndị imeobi gọọmenti mere ụbọchị Tọzde.
Ikwu megide agbụrụ
Nkenke aha onyonyo Raheem Sterling natara nzere ahụ n'aka onye nchịkọta Gareth Southgate
Ndigbo na Yoroba bụ otu afọ mụrụ - Oba Ogunwusi Adeyeye
Raheem Sterling bụ onye egwu Manchester City eritela nturuugo maka ikwugide ịkpa oke agbụrụ nke BT Sport Industry Awards nyere ya ụbọchị Tọzde.
Mpụ na aghụghọ adọbala ụmụafọ Naịjirịa ise n'ụlọikpe na Kenya
19 Julaị 2018